जव कान्छीले गल्लीभित्रको कोठीमा शरीरसँग भारु साट्न थालिन् ! | suryakhabar.com
Home पत्रपत्रिका जव कान्छीले गल्लीभित्रको कोठीमा शरीरसँग भारु साट्न थालिन् !
on: September 29, 2018 In: पत्रपत्रिकाTags: No Comments
काठमाडौं । बालकै देखिन्छिन् उनी । शरीरले किशोरावस्थाको आकार समेत लिइसकेको छैन । गहुँगोरो वर्ण, होचो कद र पातलो शरीर, गामबेसी गर्दाको पहिरन, फुंग उडेको मुहार, बैंसालु उमेरमा आउनुपर्ने चमक छैन। माइती इन्डियाकी इन्चार्ज इन्दिरा पाण्डे र नेपाली जनसम्पर्क समिति, भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेको पहलमा कान्छी ‐नाम परिवर्तन) भारतको नयाँ दिल्लीस्थित जिबीरोडबाट हवाई मार्ग भएर नेपाल फर्काइँदै थिइन्।
असोज ६ गते दिउँसो नेपाल एयरलाइन्सबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रँदा उनका वृद्धावस्थाका बाबु पनि सँगै थिए । बाबुछोरीका मनभित्रका असन्तुष्टि मुहारमा झल्कन्थ्यो। उतै बसेर अझ पैसा कमाउने महत्वाकांक्षाले नछाडेकाले भनिन्, ‘फर्काएर के भो म फेरि गइहाल्छु’ शरीर नेपालमा पुगिसक्दा कान्छीको मन दिल्लीमै थियो ।
ती महिलाले भारतमा काम गर्दा निकै पैसा कमाइने सुनाइन्। गरिबीले थिचिएकी कान्छी लोभिइन्। परिवारका सदस्यको सहयोगमा २०७२ सालको दसैंअगावै उनी सीमा काटिन। चिनेजानेका चारजना दिदीहरू उनको साथमा थिए। उनीहरूकै साथमा रक्सौलबाट रेल चढेर दिल्लीस्थित जिबी रोड पुयाइयो कान्छीलाई।
उनी दिल्लीको कोठीमा मात्र सीमित भइनन्। मुम्बई र पुनासम्मको यौनबजारमा लगिन्थिन् कान्छी। जिबी रोडमा प्रतिदिन दुईदेखि पाँच हजार भारुसम्मको कमाइ हुने उनले सुनाइन् । दिल्लीबाहिर जाँदा त्योभन्दा बढी कमाइ हुन्थ्यो।,यो खबर आजकोनागरिक दैनिकमा छ ।
अध्यक्ष दाहालले सहीदहरुको सपनामाथि होली खेलेका छन्ः नेकपा विप्लव समूह